I-Semalt: Amawebhusayithi we-Free Scraper Tools Okudingeka Ukwazi Ngawo
Eyaziwa nangokuthi ukukhwa kwesikrini, ukukhwabanisa kwewebhu kuyindlela yokudonsa idatha kusuka kumawebhusayithi nokugcina ulwazi kumadokhumenti. I-web scraping ihilela ukusebenzisa amathuluzi wokuhlunga idatha aphendulela amafayela angahlelekile kumawebhusayithi abe yimibhalo ehlelwe kahle. Emhlabeni wonke, kukhona ukutholakala kwamahhala we-website scraper amathuluzi asebenzisana kalula namasayithi afana nabantu.
Embonini yokukhangisa yanamuhla, amathuluzi we-website scraper adlala indima ebalulekile kubakhulogi, abanikazi bewebhusayithi, abathengisi, kanye nabaphathi bewebhu.
Nansi uhlu lwe-intanethi ye-intanethi yamahhala ye-web scraper ongayilanda futhi uyifake kudeskithophu yakho - gerda herzog meiler.
i-Mozenda iyisithuluzi samahhala sewebhu samahhala esusa kalula idatha kusuka kuwebhu. Isofthiwe ye-Mozenda ivumela abasebenzisi ukulanda nokukhipha okuqukethwe kumawebhusayithi ngaphandle kokubhalisa. Le software inesisebenzi esibanzi esisekelayo se-intanethi esinikeza izeluleko kumakhasimende ukuthi angayisebenzisa kanjani futhi ayifake kuma-desktops awo.
Ukukhwabanisa okuvamile kungenye yesofthiwe ekhululekile ephezulu ehlinzeka abasebenzisi bokugcina ngeziqephu zombhalo kanye nemethadatha. I-Crawl evamile iphinde inikeze amakhasimende anakho ngamathakasethi ahlelekile.
Isosi elihle iyithuluzi lamahhala lewebhu lewebhu elenzelwe ukukhipha idatha ecebile ngezilimi ze-XML nezilimi ze-HTML. Isosi elihle liyi-software yama-Python esakhelwe isofthiwe efakiwe ohlelweni lwe-Ubuntu.
i-Diffbot isofthiwe esetshenziswa kakhulu ngabathuthukisi ukukhipha idatha kusuka kumasayithi. I-Diffbot isebenza ngokuvula isayithi ibe yisiKhombisi sokuLungiselela uhlelo lokusebenza.
Isofthiwe ye-grabby isiza ababonisi bokukhangisa nabathuthukisi ukuba babhale amakheli e-imeyli. Akukho ukufakwa okudingekayo ukusebenzisa i-Grabby mahhala iwebhusayithi ye-scraper.
I-ScraperWiki ingenye yesofthiwe ehamba phambili ye-scraper ehlinzekwa mahhala nxazonke
I-ScrapeHero iyithuluzi lamahhala lewebhu elivulekile eliguqulela amasayithi abe yi-API. I-ScrapeHero ine-interface yomsebenzisi enobungane evumela abathengisi futhi
Umculi wokuqukethwe wewebhu
Uma kuziwa ekuqotheni iwebhu, isofthiwe oyisebenzisayo isho okuningi mayelana namakhono akho ebhizinisi. Le software ikhululekile futhi inikeza abatshalizimali abazimele ithuba ukukhipha idatha emithonjeni eminingi . I-Web Content Extractor inikeza abasebenzisi isilingo sesilingo samaviki amabili kanye nesiqinisekiso sokubuyisela imali.
I-Winautomation ingu- ithuluzi lokuhlenga iwebhu elenza abasebenzisi bakwazi ukwenza imisebenzi ye-website esekelwe. Le software isebenza kuma-Windows operating systems.
Ithuluzi lokukhipha i-Octopus
I-Octoparse isofthiwe esekelwe i-Windows esekelwe mahhala kuwebhu. I-Octoparse ijika idatha engakhiwanga kumakhodi afakwe kahle ngaphandle kokuhlela. Le software ngokuvamile inconywa kubathengisi ngaphandle kwamakhono okuhlela.
Uma usebenze ngokukhipha idatha yedatha, i-Connotate iyisofthiwe engcono kakhulu yokufaka kwideskithophu yakho. I-Connotate inikeza abasebenzisi izibonelo ezifanele zendlela yokwenza idatha kumawebhusayithi.
Lena isofthiwe engcono kakhulu yokuqhafaza iphrojekthi yakho yokwenza injini yokusesha. I-CrawlMonster ivumela abathengisi ukuba bahlole amasayithi ahlukahlukene ukuze bahlole idatha ehlukahlukene ekhona kuwebhu.
Ukukhipha iWeb kuhilela ukuguqula idatha ehleliwe futhi engaqondakali kumafayela aqoshiwe. Amathuluzi okukhwa kwewebhu avumela abanikazi bewebhu, ababhulogi, nabathengisi bezokumaketha ukuba bakhiphe idatha ehlukahlukene ehlukahlukene neyintandokazi kokubili ngezinhloso ze-intanethi nokungaxhunyiwe ku-intanethi. Landa bese ufaka i-website ye-scraper yamahhala eyenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zakho kanye nokucaciswa kwakho.